कोरोनाले अक्रान्त प्रदेश २ को अवस्था अझै भयावह हुने, रोकथाम किन भएन् ? के गर्दैछ सरकार ? - No 1 News Portal Online News Nepal
Home मधेश प्रदेश कोरोनाले अक्रान्त प्रदेश २ को अवस्था अझै भयावह हुने, रोकथाम किन भएन्...
कोरोनाले अक्रान्त प्रदेश २ को अवस्था अझै भयावह हुने, रोकथाम किन भएन् ? के गर्दैछ सरकार ?
धनुषा : प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमण तिब्र रुपमा फैलिदै गएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार यस प्रदेशमा हालसम्म ९ हजार ७ सय ९५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने ८७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार यस प्रदेशमा संक्रणम र मृत्युदर अझै बढ्ने छ ।
कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामकालागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको विज्ञ समुहका सदस्य डा. रामकेवल साह प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमण फैलिनुका मुख्यतः ४ कारण औँल्याउँछन् । जनघनत्व, खुला सीमा, गरिबी र स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना फैलिने मुख्य कारक तत्त्व रहेको उनको विश्लेषण छ ।
यस प्रदेशमा हालसम्म देखिएको संक्रमितको संख्या अन्य प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा धेरै देखिनु स्वाभाविक रहेको बताउँदै उनले प्रदेश २ को तथ्यांक प्रस्तुतिसमेत अफवाहपूर्ण ढंगले भइरहेको आरोप लगाए ।
‘जनसंख्याको घनत्वको अधारमा हेर्दा अन्य प्रदेशभन्दा धेरै बढी संक्रमण फैलियो भन्न मिल्दैन । २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो प्रदेशमा संक्रमितको संख्या देखेर मात्र विश्लेषण गर्नुहुँदैन,’ डा. साहले भने, ‘सबै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको छ । ३ प्रतिशत भू भागमा २० प्रतिशत जनसंख्या छन् । यहाँ डाटाको प्रस्तुति गलत तरिकाले भइरहेको छ । ८ वटै जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएकाले यूपी र बिहारमा संक्रमण नियन्त्रण नभए यहाँ पनि रोक्न सकिन्न ।’
प्रदेश २ मा गरिबी सबैभन्दा धेरै भएकाले कामको शिलशिलामा भारत ओहोरदोहोर र चेतनाससँगै सतर्कतासमेत नरहेकाले संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएको उनले बताए । प्रदेश २ सरकारले संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामक लागि गठन गरेको विज्ञ समूहका सदस्य समेत रहेका उनी प्रदेशको स्वास्थय व्यवस्था सुधारतर्फ पहिल्यैदेखि सरकारले कुनै पहल नगर्दा अहिले यस्तो परिस्थिति सिजर्ना भएको उल्लेख गरे ।
‘यहाँ २००७ सालपछि राम्रो विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल बन्न सकेन् । एकै रातमा तारा तोड्न सकिन्न नि १,’ उनले थपे, ‘२० वर्षपछि समेत अस्पतालमा दरबन्दी थप भएको छैन् । स्तरउन्नति भएको छैन् । अहिले यो तुरन्त हुनुपर्छ ।’
कोरोना परीक्षण सबै जिल्लामा सर्वसुलभ हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सबैठाउँमा मेसिन नभए पनि सबै जिल्लामा स्वाब संकलन गर्ने सहजता हुनुपर्छ । रिपोर्ट २४ घण्टाभित्र आउनुपर्छ । यहाँ जनसंख्याको आधारमा मेसिनको एकदमै न्यून क्षमता छ । प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले राम्रो सहयोग नगरेकाले परीक्षणको दायरा बढ्न सकेको छैन्,’ उलने भने ।
प्रदेशमा भएका अस्पताल, मेडिकल कलेज सबैलाई कोभिड अस्पताल बनाउनुपर्ने बताउँदै डा. साहले कोभिड नियन्त्रण मात्र सरकारले गरेर सम्भव नरहेको बताए ।
समाजिक अगुवा, धार्मिक संगठन, पेसागत संगठन, जातीय संगठनले संजाल बनाएर समाजिक सेवामा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले अवस्था अझै भयावह हुनसक्ने बताउँदासमेत सरकारले यसतर्फ खासै तयारी नगरेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘प्रदेश सरकार आफ्नो स्रोत साधन अनुसार रोकथाममा लागेको छ । तर, यसको व्यवस्थापन संघीय सरकाले गर्नुपर्छ । सरकारले यहाँ न जनशक्ति र न उपकरण पठाइ रहेको छ,’ उनले गुनासो पोखे । जनस्तरमा समेत भौतिक दूरी, मास्क, सेनिटाइजरलगायतका साधनको प्रयोग अझै राम्ररी हुन नसकेको उनले बताए ।
खुला सीमा, स्वास्थ्य व्यवस्था र अनुशासनहीनताले प्रदेशमा संक्रमितसँगै संक्रमणबाट मृतकको संख्या बढ्दै गएको स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखको विश्लेषण छ । सीमा सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाल प्रहरीसमेत खटाइए पनि लुकुछिपी आउजाउ भइरहेकाले संक्रमणको जोखिम बढिरहेको नेपाल प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डिआइजि धीरजप्रताप सिंहले स्वीकार गरे ।
उनका अनुसार सरकारले भारतबाट आउन सिरहाका माडर, रौतहटको गौर र वीरगञ्ज नाका मात्र खुला गरिएको छ । तर, सीमाक्षेत्रका बासिन्दा मलखाद, खाद्यान्नलगातयका सामग्री खरिदका लागि लुकिछिपी भारततर्फ ओहोरदोहोर गर्ने क्रम अझै जारी छ ।
‘मल किसानलाई आवश्यक छ । एक बोरा मल ठूलो कुरा होइन् । तर मल लिन जानु र भारतबाट संक्रमित भएर आउनु ठूलो कुरो हो,’ डिआइजी संहले भने, ‘प्रहरी रातदिन खटिएकै छ । खुला सिमानाले चुनौती छँदैछ । हामीले भारतबाट लुकिलुकी आउने केहीलाई पक्राउ पनि गरेका छौँ । ओहोरदोहोर रोक्न सीमामा झडपका घटना पनि भएका छन् ।’
प्रदेशमा दिनहुँ आन्दोलन, विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा भीडभाड हुने गरेकाले संक्रमण नियन्त्रण थप चुनौती भएको उनको भनाइ छ । कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएका करिब ४० जनाले गलत सम्पर्क नम्बर र ठेगाना दिएकाले सम्पर्कमै आउन नसकेको डिआइजी सिंहले बताए ।
उनका अनुसार लकडाउन भएको ७० प्रतिशत व्यक्ति मास्क लगाउन आनाकानी गर्ने गर्थे । तर, प्रहरीको सक्रियता र कारबाहीपछि ३० प्रतिशतले मात्रै मास्क लगाउन आलटाल गरेका छन् । प्रहरीले मास्क नलगाउने १ लाख २० हजार जनालाई कारबाही गरेको उनले बताए ।
लकडाउन खुलेपछि भारतबाट फर्किएकाहरू सोझै समुदायमा गएर मिलेका कारण संक्रमण अझै बढेको सशस्त्र प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्मचार्यको ठम्याइ छ । ‘भारतबाट फर्किर कोरोना पुष्टि भएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । जसले गर्दा समुदाय जोखिम बढ्यो,’ उनले भने । सीमामा ओहोर दोहोर रोक्न कडा निगरानीसँगै सशस्त्र प्रहरीले माइकिङ, साइकल, मोटरसाइकल पेट्रोलिङ थालेको उनको भनाइ छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गरी संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । स्वास्थय निर्देशनालय प्रदेश २ का जनस्वास्थय प्रशासक तथा प्रवक्ता विजय झाका अनुसार प्रदेश सरकाले अस्पताल स्तरोन्नति, हरेक जिल्लामा ५ सय बेडको आइसोलेसन निर्माण र उपकरण खरिदमा तीव्रता दिएको छ । प्रदेश सरकारले हालसम्म २ वटा पीसीआर मेसिन खरिद गरेको र ७ वटा अझै खरिद गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।
‘८ वटै जिल्लामा पीसीआर मेसिन र ४ वटा अटोमेटेड मेसिन राख्ने कुरो भइरहेको छ । यो महिनाको अन्त्यतिर थप ३ वटा पीसीआर मेसिन खरिद हुँदैछ,’ झाले भने, ‘जम्मा ५० वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने योजना छ । पहिलो चरणमा ३० वटा खरिद हुन लागेको छ ।’ प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा हालसम्म १४ वटा भेन्टिलेर जडान गरिएको उनले बताए । तर, संक्रमणको अवस्था झनै भयावह बन्दै गएकाले प्रदेश सरकारको यो प्रयासमात्र पर्याप्त नरहेको जानकार बताउँछन् । todaypati
Previous articleमङ्गलबारबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सुचारू हुने, तयारी पूरा
Next articleभेन्टिलेटर आभावमा सप्तरीमा एक संक्रमितको मृत्यु